Kuyaziwa ukuthi kwezinkambiso zokuziphatha futhi kuhlanzekile ngokokuziphatha ziphakame umphakathi osekelwe kokuhlangenwe nakho komphakathi kanye awekho ngaphansi - Ababhali ababekhuluma beveza kubo. Musa ukhombe kanye nesikhathi nesenzakalo othile amazinga kuyisiphazamiso esimisweni sokuhle nokubi yokuziphatha. Ngokungafani kwezinkambiso zokuziphatha kuhambisana nemigomo, umthetho kuphakama nokuthuthukisa njalo ngokuhamba umsebenzi professional izikhungo ekhethekile emphakathini. Le nqubo ibizwa obizwa ngokuthi kwemtsetfo. Ngakho, umthetho ukwenza, umqondo, izimiso, izinhlobo kwemtsetfo uhlale subjective futhi lockable ngesikhathi. Ngokwesiko, umthetho wokwenza ezimweni eziningi wahlanganyela ngokukhethekile wadala le njongo izinhlaka isimo. I esiyimbangela ngesisekelo ekwakhiweni kwemithetho kuyinto pravoobrazovaniya - elisungulwe empilweni yomphakathi ngesikhathi umkhuba zokuziphatha futhi ukugunyazwa imithetho kungukuthi ethulwa ngesimo izenzo zomthetho.
Njengoba izingxenye zesakhiwo kufakwe kwemtsetfo: umqondo, izimiso, izinhlobo kanye namafomu. Njengoba sekushiwo, ekwakhiweni kwemithetho cishe njalo kwandulelwe umthetho-ngoba umcabango we okuqukethwe ebanzi kuka umqondo kanye nezimiso yezinhlelo zokwenziwa kwemithetho.
Lo mkhuba ekwakhiweni kwemithetho ihlukaniswa ngezizathu ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, kwemtsetfo, umqondo, izimiso, ukubukwa kuhluke phezu luhlangotsi, okungukuthi, labo izikhungo ukuthi banelungelo bafeze lo uhlobo umsebenzi. Kukhona uhlobo kwemtsetfo, njengoba inhlolovo, okuyinto ngqo futhi ngokushesha kwemtsetfo abo bonke abantu, eyenziwa phakathi ukuvota. Kwamanye amazwe, njenge-Switzerland, lolu hlobo kubalulekile ekwenzeni izinqumo ezibaluleke kakhulu kangakanani izwe lonke noma endaweni ethize, ngonyaka kuleli zwe Kwenziwa kuze kube nengxenye ayizinkulungwane referendums emithathu. Uhlobo oluvame kakhulu i-kwemtsetfo, eyenziwa ngumuntu kwakhiwa ngokukhethekile ngenhloso zikahulumeni. Kulelizinga, uphinde wabalula izinhlobo ezahlukene kanye izinhlobo kwemtsetfo.
Ngokwesibonelo, uma ejensi zomphakathi ngokwayo eba umthetho ngokwawo ulunika amandla zomthetho, lo msebenzi libhekwa njengoba ngqo kwemtsetfo. Umqondo, izimiso, izinhlobo ibuye isakhiwa yilo umzimba.
Uma sehlangano yomphakathi sihamba umsebenzi ukudalwa imithetho zomthetho komunye umzimba, ibizwa ngokuthi ekwakhiweni kwemithetho ezithunyelwe. Agunyaziwe kwemtsetfo okukhulunywe ngawo imisebenzi enjalo, lapho igunya lomphakathi avumela izenzo zomthetho akhiwa nakwezinye izinhlangano, ezihlanganisa ezingekho ngaphansi kukahulumeni kuphela.
Kushaywa kwemtsetfo uhlukanise futhi wathola amandla wezomthetho isenzo zomthetho. Ngokwesibonelo, iPhalamende kwenza imithetho - njengoba sakhiwo esiphezulu zomthetho. Kwaba kungumsebenzi wakhe kuMtsetfosisekelo. Zonke ezinye izikhungo kwamandla kulokhu ukuthatha yedolobha.
isayensi zomthetho Modern likhombe izimiso olandelayo kwemtsetfo:
- intando yeningi, kulindeleke ukuba babambe iqhaza kule nqubo zomthetho ukuze ehlukahlukene yasakazwa okungenzeka izakhamuzi. It is ukusebenza amafomu ezifana nhlolo-vo, inhlolovo, ingxoxo yomphakathi, okukhululekile, umsebenzi ephalamende.
- imithetho ehlinzekela ukuhambisana nemithetho amazinga ehlukene isenzo zomthetho akungqubuzani ezinye izenzo wezomthetho ephakeme amandla ngokomthetho.
- yesayensi kusho ukuzidumisa ngokudalwa imithetho ochwepheshe zesayensi kanye nokusetshenziswa isayensi. Lesi simiso kabanzi Kunconywa ukuba asebenzise inqubo zomthetho ukuze isipiliyoni global yalo msebenzi, umkhuba zanqwabelana, lezi eziyimpumelelo futhi ulwazi izinguquko ukwazi wezomthetho umphakathi.
- Ukwenza, okuyinto aqondwe njengokufaka isidingo ukukhetha ngqo futhi ikakhulukazi lapho kwemukelwa khona umthetho. Lokhu kuqinisekiswa efaneleyo okusezingeni eliphezulu zamakhono amalungu imisebenzi umthetho wokwenza.
- Executive, okuvumela ukuthuthukisa futhi uthathe izenzo zomthetho ngempumelelo ngempela.
- emphakathini nokuxhumana theory kanye umkhuba, okunikeza emphakathini ekwakhiweni kwemithetho.
Kungakanani uhambise kufanele afake isicelo Registrar? Indlela kusebenza umbhalisi ngokusebenzisa "amasevisi Yomphakathi"?
Art. 139 TC RF ngamazwana
Kangakanani luhlolo abantu abasaphila. luhlolo Forensic wezokwelapha: imithetho
Kuhle Ungadliwa: Indlela Yokwenza yokweqa ekhaya
Senza manicure amaphuzu
Ithumba Periodontal: ukwelashwa ekhaya
Ubude ukuphila amalulwane. izici Jikelele, Ukudla, ukukhahlamezeka kwendawo
Katya ogonek: Biography of the Queen of chanson Russian